Mas'uuliyaddii William Ruto miyaa loo wareejiyay Fred Matiangi? - BBC News Somali
Mas'uuliyaddii William Ruto miyaa loo wareejiyay Fred Matiangi?
Fred Matiangi waa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa digreeto uu soo saaray ku magacaabay Fred Matiangi oo ah wasiirka arrimaha gudaha in uu noqdo madaxa guddiga awoodda badan ee Mashaariicda Horumarinta Qaran.
Waxaa laga yaabaa in ay kula noqoto magacaabis sahlan, balse durba waxa ay abuurtay fulkaanooyin siyaasadeed oo qabsatay warbaahinta Kenya.
Saakay boggaga hore ee Jaraa'idka waxaa lagu soo toosay iyada oo ay ku qoranyihiin in xilka Matiangi loo magacaabay uu meesha ka saarayo mas'uuliyadihii madaxweyne ku xigeenka William Ruto oo isaga laftiisa hadal heyntiisa ay aad u badneyd dhawaanahan.
Xildhibaanka laga soo doorto degmada Keiyo South mudane Daniel Roho ayaa wargeyska Standard ku yiri "Waa arrin la yaab leh, sababtoo ah, dhammaan wasiirada waxa ay hoos tagayaan wasiir iyaga la mid ah".
Uhuru Kenyatta: "Waa la i afgembiyay"
Golaha Mashaariicda Horumarinta waxaa ku wada jira dhammaan wasaaradaha, xeer illaaliyaha guud iyo madaxa shaqaalaha rayidka ah , waxayna hadda kadib toos u hoos tagayaan wasiirka arrimaha gudaha Fred Matiangi , kaas oo si toos ah warbixinta ula wadaagi doona madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Xigashada Sawirka, Uhuru Kenyatta
Uhuru iyo Matiangi oo Mombasa ku sugan magacaabista kadib
Lama oga kaalinta madaxweyne ku xigeenka uu arrintan ku yeelanayo, balse waxaa muuqata in laga wareejiyay mas'uuliyaddo waaweyn oo miisaankiisa siyaasadeed kor u haysay.
Sida uu dastuurka Kenya qabo, madaxweyne ku xigeenka William Ruto ayay tahay in uu shaqada uga hooseeyo madaxweynaha, xilkiisana waa kormeer iyo hormuudka shaqada wasaaradaha.
Dhibka jira ayaa ah in golahan qaran uu ahaa mid horey u jirey, islamarkaasna uu hormuud ka ahaa madaxweyne ku xigeenka.
Uhuru iyo Ruto
Uhuru iyo Ruto ayaa la sheegay in ay ku heshiiyeen 'qori isu dhiibis'
Uhuru iyo Ruto ayaa markii labaad si wadajir ah loosoo doortay sannadkii 2017-kii, waxaase jirta in sida dastuurka uu qabo madaxweynaha uusan mar seddexaad isa soo sharixi karin marka la gaaro sannadka 2022-da.
Balse sida ay sheegeen saaxiibada iyo dadka ay siyaasadda isu dhowyihiin Ruto, waxaa jiray heshiis labada nin ka dhaxeeyay oo ahaa in marka uu xilka ka dhamaado Uhuru, uu isa soo sharoxo Ruto, si markaas uu madaxweyne u noqdo.
Bilihii ugu dambeeyay soo baxay wax u muuqda madmadoow soo kala dhexgalay labada nin kadib markii ay heshiis gaareen madaxweynaha iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, kaas oo ay aad lid isugu yihiin madaxweyne ku xigeenka.
Uhuru iyo Raila ayaa waxa ay wadaan arrin ay ugu magacdareen 'dhismaha buundooyinka' oo lagu heshiisiinayo beelaha waaweyn iyo qoowmiyadaha Kenya degen ee isku qabtay doorashooyinka , gaar ahaan rabshadihii dhacay 2007-dii. Qorshayaasha ay labada nin wadaan waxaa ka mid ah in afti dadweyne la qaado si loo badelo dastuurka, loona helo awood qeybsi dhab ah, waxaase arrinkaas si cad u diiday madaxweyne ku xigeenka Ruto oo la sheegay in uu baqdin uga qabo fursadihiisa madaxweynenimo ee 2022-da.
TOOS Dagaalkii xabsiga dhexe: "Meeshaas ciidan asluub ah ilaalintooda kaliya kuma filna"
Waa Tuma haweeneyda madowga ah ee uu Biden u xushay ku xigeenkiisa?